Kuzokwakhiwa iSwimming Pool eMthethomusha | News24
Kuzokwakhiwa iSwimming Pool eMthethomusha
PHOTO:Nokuthula khanyile Emcimbi wokuphendulwa kwesoyi lapho kuzokwakhiwa khona indawo yokubhukuda eMthethomusha Primary e-Edendale.
ISIKOLE samabanga aphansi sase Edendale uMthethomusha Primary, kuzoba ngesokuqala kulendawo ukuthi sibe nesakhiwo sokubhukuda. Lokhu kuzofezekiswa usomabhizinisi wendawo uMnuz Themba Njilo we-Nduduzo Funeral Home, ozofeza isithembiso sakhe seminyaka sokwakhela lesikole indawo yokubhukuda.
Ngesikhathi kuphendulwa isoyi lapho kuzokwakhiwa khona lendawo yokubhukuda ngoLwesihlanu olwedlule, uMnuz Njilo uthe okumenze wafuna ukwakha lendawo yokubhukuda ukubona ukwanda kwesibalo sezingane ezishona ngokugwiliza.
“Njengomuntu onebhizinisi labangcwabi ,ngiyazazi izinto ezibulala kakhulu abantu, ebusika kushona kakhulu ogogo kanye nabantwana abancane bebulawa amanzi bese kuthi ehlobo kushone abafundi abasuke besemaholidini behambele izindawo ezifana namabhishi no-swimming pool emadolobheni abasuke begwilizile.”
UNjilo uthe inkinga enkulu kusuke kungukuthi izingane zasezikoleni zabampofu azifundisekile ngamanzi.
“Ukugwema into efana naleyo ngibone kukuhle ukuthi ngakhe lendawo yokubhukuda ukuze izingane zithole ukufundiseka zisesemazingeni aphansi.”
UNjilo uthe ulindele ukuthi ugandaganda uqale ukumba ngamaholidi kaJuni ukuze umsebenzi uzoqala.
“Uma kushaya isikhathi sasehlobo nje kufanele ube umsebenzi wonke usuphelile nabantwana sebekwazi ukusebenzisa lesakhiwo.”
UThishanhloko waseMthethomusha uMnuz Msizi Gumede uthe kuyabathokozisa njengesikole ukuthi uNjilo agcine isithembiso sakhe.
“Wamemezela eminyakeni cishe emithathu eyedlule kade sinomcimbi lapha esikoleni ukuthi unesifiso sokuthi asakhele indawo yokubhukuda. Kuyasithokozisa ukumbona esigcina isithembiso sakhe.”
UGumede uthe ukuba khona kwalendawo yokubhukuda kuzobalekelela kakhulu ekukhuphuleni amazinga aphansi abantwana ababhalisa kulesikole.
“Njengamanje sinenkinga enkulu yokuncipha kwesibalo sabafundi bethu, ngakho ukuba yisikole sokuqala esine-swimming pool e-Edendale kuzokwenza umehluko ngoba izingane eziningi zifudukela ezikoleni zasemadolobheni ngoba zifuna zona lezakhiwo,” kusho uGumede.
UNobhala we-ANC ngaphansi kwesiFunda saseMoses Mabhida uMnuz Mzi Zuma naye obeyingxenye yomcimbi wokuphendulwa kwesoyi unxuse abaseMthethomusha ukuba lendawo yokubhukuda bayivulele nezikole ezingomakhelwane.
“Sibonga uNjilo ngokusukumela izinto ezithinta inhlalonhle yomphakathi. Kufanele lendawo yokubhukuda ikhuphule amakhono ngoba ngokubhukuda abantwana bangakwenza umsebenzi wokuziphilisa. Siyacela ukuthi kube khona indlela yokulekelelana nezikole eziseduzane lesi kube yisakhiwo esizosiza bonke abafundi bendawo,” kusho uZuma.